Fanovana fomba fisaina sy fiaina izao | NewsMada
Fanovana fomba fisaina sy fiaina izao
Tsy zatra manara-dalàna ny Malagasy? Na efa lalina sy ela loatra ny gaboraraka, saika nahahenika ny sehatra rehetra. Tarazo tsy mahafa-bela. Izay no mbola mahama­fimafy sy mahasarotsarotra ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao? Indrindra ho an’Anta­nanarivo sy ny manodidina: Renivohitra, be mponina, maro mpivezivezy, ifamoivoizan’ny karazan’olona…
Ny fampanajana sy ny fampiharana lalàna velona no tsy ampy sa ny mponina no manahirana amin’izany? Na ahoana na ahoana, fotoana fanovana ny fomba fisaina sy ny fomba fiaina izao fotoan-tsarotra diavin’ny firenena izao. Mihatra amin’ny aina ny ady atao amin’ny fihanaky ny valanaretina: na mandresy azy na resiny, na velona na maty. Tsy azo tamoraina ny ady, mila fitandremana sy faharetana.
Tsy misy afa-tsy ny fanovana fomba fisaina sy fomba fiaina no handresena amin’izao. Tsy hita maso ny fahavalo, tsy mifidy olona na faritra, mora mifindra… Mila avela amin’izay ny gaboraraka amin’ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy firaharahana ny hafa, ny tsy fijerena lavitra. Miara-dalana amin’izany ny fanovana fomba fiaina amin’ny fidiovana sy ny fanadiovana, ohatra, ny fanajana fotoana, ny fifanajana…
Amin’izany, tsy ny valanaretina ihany no ho resy tosika. Hisy ihany koa ny fivoarana sy ny fandrosoana eo amin’ny maha olona, ny fitandroana ny fifandraisana amin’ny hafa, ny fanomezan-kasina ny fiarahamonina, ny fahatsiarovana ny tanindrazana iombonana. Tsy fahatsapan-tena ve no tsara hahatongavana sy hiainana izany? Fa tsy fanaraha-maso, na fanerena, na fanasaziana, na famaizana…
Matoa tonga amin’ny hoe henjana sy hentitra kokoa ny mpitandro filaminana amin’ny fanaraha-maso sy ny fam­piharana ny fepetra ara-pahasalamana amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, misy izany ny gaboraraka. Za-dratsin’izay ela izay? Mila manova fomba fisaina sy fomba fiaina àry raha tsy te hoteriterena, indrindra handresy ny valanaretina… fahavalo iombonana.